Sintomy Atlas Cheetah E Interception FS2004
Atlas Cheetah E pifandraisan FS2004
E Cheetah mpiady pifandraisan. Ny vinanihefaka elatra fiaramanidina mahafinaritra ny manidina. Tena miovaova, na dia ambany hafainganam-pandeha. Ny fiaramanidina dia natao ho akaiky araka izay azo atao ny tena iray. Ny 2D tontonana dia natao avy amin'ny sary, ary misolo tena ny fanahafana ampiasain'ny SAAF. Izany dia ahitana ny modely fonosana, 2D tontonana, feo sy VC, dia tanteraka animation.
Ny Atlas Cheetah dia fiaramanidina mpiady Afrika Atsimo, mandroso ho an'ny Afrika Atsimo Air Force (SAAF) sy ny amin'izao fotoana izao niasa ny Ekoateriana Air Force (FAE). Dia voalohany naorina ho toy ny tena fanavaozana ny Dassault Mirage III ny Atlas Aircraft Corporation (tatỳ aoriana Denel Aviation) Afrika Atsimo (nanorina 1965) tany Afrika Atsimo, ary Mifototra amin'ny Israeliana Kfir mpiady.  telo samihafa variants noforonina , 16 lafiny roa-seza Cheetah D, 16 tokan-seza Cheetah E sy 38 tokana fanaovam-panavotana Cheetah C. ny Cheetah Es dia nisotro ronono tao 1992, ary ny Cheetah Cs sy Cheetah Ds tamin'ny Aprily 2008, rehefa hisolo ny Saab Gripen. Vitsivitsy dia mbola niasa tany Afrika Atsimo ho fitsapana fiaramanidina fiaramanidina. (Wikipedia)